နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အေပက်အဖွဲ့ဝင် နိုင်င? - Yangon Media Group
ဒါနန်း(ဗီယက်နမ်း)၊ နိုဝင်ဘာ ၁ဝ
အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (အေပက်)အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏(Partenering For New Dynamism ForaComperhensively Connnected and Integrated Aisa-Pacific) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ မိနစ် ၄ဝ တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ရှိ ဒါနန်း Furama Resort ၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အေပက်နှင့် အာဆီယံအကြား ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေး နွေးကြသည်။ ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒါနန်းမြို့ရှိ Sharaton Resort ၌ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာထရမ်ဒိုင်ကွမ်နှင့်ဇနီး ငုရင်ထိဟီရမ်တို့က အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာရှ- ပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(အေပက်)အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်များ အလွှတ်သဘောဆွေး နွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသော အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အေပက်အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ ဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများနှင့် အေပက်အဖွဲ့ ဝင်မဟုတ်သောနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ၊ အကြီးအကဲများ၊ ဝန်ကြီးများနှင့်အဆင်မြင့် အရာရှိ ကြီးများအား တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်သည်။
အာရှ-ပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (အေပက်)မှာ လွန်ခဲ့သော ၂၈ နှစ်က ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူ တက်တက်ကြွကြွဖွံ့ဖြိုးလာကြောင်း၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲလာမှု၊ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာမှုသည် အေပက်အတွက် အခွင့်အရေးနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကိုပါရင် ဆိုင်လာရကြောင်း၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အခြားသောနိုင်ငံများနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ကတိကဝတ်များကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်၊ ပြည်သူများ နှင့်စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းများ နီးကပ်စေရန်အတွက် အေပက်က ဆောင်ကျဉ်းပေးရန်၊ ၂၁ ရာစု အတွင်း၌ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနှင့် အားလုံး ပါဝင်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုမဟာဗျူဟာအမြင်ကို နားလည်သဘောပေါက် စေရန် အေပက်ကဆောင်ရွက်နေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွများကြောင့် စစ်သားခြောက်ဦး ကျဆုံး
ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာ??
လေပတ်ကား အရောင်းအဝယ် လက်ကြီးသမားအချို့ကို စသုံးလုံးခေါ်ယူ စစ်ဆေးပြီးနောက် ရွှေနှင့်ဒေါ်လာ ပြ